दिनदहाडै एकै परिवारका ४ जनाको मृ’त्यु, पुरा गाउ नै शोकमा !! – Namaste Dainik
August 30, 2020 August 30, 2020 NamastedainikLeaveaComment on दिनदहाडै एकै परिवारका ४ जनाको मृ’त्यु, पुरा गाउ नै शोकमा !!
यो पनि, दार्शनिकहरु निद्रा मृत्युको छोटो रुप भएको मान्छन्। बि हान उठ्दा आँखा खोल्नु मानिसको नयाँ जन्मको रुपमा लि न्छन्। वास्तु र ज्योतिष विज्ञानले जीवनको हरेक क्षण को सुक्ष्मरुपमा अवलोकन गर्ने गर्छ । दर्शनमा विहानको समय र रात्री समयमा अलग अलग नियम बनाएका छन्। राति सुत्नेसमयमा सिरानीमा यी ८ चीजहरु राख्दा वास्तु दोष हुने खतरा हुन्छ । यसको प्रभाव जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा हुन्छ ।राति सुत्नेबेला सिरानीमा जुत्ता ,चप्पल जस्ता चीजहरु राख्नु हुँदैन । वास्तुका अनुसार यी चीजले मानिसको जीवनमा असफल बनाउनुका साथै नका रात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यसले मस्तिष्कमा नकारात्मक उर्जा प्रवाह गर्ने गर्छ ।
फलामको सिक्री र डोरी दैनिक उपभोग्य सामान भित्र परे पनि यी चीजहरु बेडको नजिकै राख्नु हुँदैन । यसले जी वनमा अशुभ निम्त्याउँछ । यसले जीवनमा लगातार बाधा उत्पन्न हुने खतरा बढ्छ ।सुत्ने बेडमुनि ओखल राख्नुहुँदैन । यसले पारिवारीक सम्बन्धमा तनाव आउनसक्छ । यसले गर्दा सकारात्मक कार्यमा मन जानुको सट्टा नकारात्मक कार्यमा ध्यान जाने खतरा बढ्छ ।सिरानीको छेउमा कुचो राख्दा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सिरानीको छेउमा कु चो राख्दा यसले जीवनमा दुर्भाग्यको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।सिरानी पर्ने ठाउँमा कपडा सुकाउने गर्नुहुँदैन । यसले सफ लतामा बाधा उत्पन्न गराउँछ।बेडको सिरानीमा मोबाइल लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु राख्नुहुँदैन । यसले गम्भीर दुष्परिणाम आउने खतरा बढ्छ।